राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पुनः महाअभियोग ल्याउने तयारी - Rastrakokhabar
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पुनः महाअभियोग ल्याउने तयारी
एजेन्सी, २५ पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । अमेरिकी संसदको तल्लो सदनकी सभामुख नेन्सी पोलोसीले ट्रम्पले तत्काल राजीनामा नदिए महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने बताएकी हुन ।
आफ्ना समर्थकहरुलाई उत्तेजित बनाई विद्रोहका लागि उक्साएको आरोप ट्रम्पमाथी लागेको छ । त्यस्तै डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरुले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध पुनः एकपटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन । उनीहरुले आगामी सोमबार ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने तयारी गरेका हुन ।
यसअघि सन् २०१९ मा युक्रेनका शासकलाई गरेको टेलिफोन संवादलाई लिएर उनीमाथि महाअभियोग लागेको थियो । त्यो बेला महाअभियोग प्रस्ताव माथिल्लो सदनबाट पारित हुन सकेको थिएन ।
गत बुधबार राजधानी वासिङ्गटन डिसी स्थित संसद भवनमा हतियारसहित प्रवेश गरेका ट्रम्पका समर्थकहरुले तोडफोड तथा हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए । त्यस घटनामा हालसम्म पाँचजनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । त्यो आक्रमणलाई आंतरिक आतंकवाद तथा बिद्रोहका रुपमा चित्रित गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने अधिकार कंग्रेसको रहेको बताएका छन् । तर लामो समयदेखि राष्ट्रपति ट्रम्प जिम्मेवारीका लागि अयोग्य रहेको उनले बताएका छन ।
अहिले उपराष्ट्रपति माइक पेन्समाथि संविधानको २५औँ संशोधनमा रहेको व्यवस्थालाई सक्रिय बनाई ट्रम्पलाई सत्ताच्यूत गर्न दवाब परेको छ । २५औँ संशोधनको सेक्सन ४ मा मानसिक वा शारीरिक रुपमा राष्ट्रपति काम गर्न सक्ने अवस्थामा नभए उनलाई सत्ताच्यूत गरि उपराष्ट्रपतिले जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
ट्रम्पको मन्त्रीमण्डलमा यसबारे चर्चा भए पनि उपराष्ट्रपति पेन्स त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले महाभियोग प्रस्तावलाई राजनीतिक रुपमा निर्देशित रहेको भन्दै खारेज गरेको छ ।
अमेरिकी इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले दुईपटक महाअभियोगको सामना गर्न नपरेको बिबिसीले जनाएको छ ।
Previous Post	नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आउँछ ?
Next Post	आजको राशिफल (वि.सं. २०७७ पुस २५, शनिबार )
६ माघ २०७७, मंगलवार १०:२६